Fisamborana ny fanahin'i Islandy amin'ny fenitra mihaja an'ny Reykjavik vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fisamborana ny fanahin'i Islandy amin'ny fenitra mihaja an'ny Reykjavik vaovao
Toeram-pisakafoanana miroborobo miaraka amin'ny trano fisotroana kafe mangatsiatsiaka, fialam-boly mihetsiketsika ary mozika mahafinaritra, ny hazavan'ny masoandro dia mamirapiratra amin'ny tanàn-dehiben'i Islandy ary, miaraka amin'ny fahaiza-manao mahazatra, ny fahatongavan'ny The Reykjavik EDITION dia manamafy bebe kokoa ny fahaizan'ny EDITION Hotels hipetraka ao anatin'ny fotoana fohy. toerana mety amin'ny fotoana mety.
"Reykjavik dia tanàna tsara tarehy, tanora - tonga lafatra ho an'ny marikay," hoy i Ian Schrager, mpisava lalana mitsinjo ny hotely boutique, mpamorona PUBLIC sy EDITION. "Mihevitra izahay fa izao no fotoanan'i Reykjavik ary eto izahay no tena ivon'izany sy amin'ny fotoana tonga lafatra."
Misokatra amin'ny vinavina amin'ny 9 Novambra 2021, ny Reykjavik EDITION dia hametraka fenitra vaovao ho traikefa hotely tena raitra voalohany ao an-tanàna, hanambatra ny tsara indrindra amin'ny renivohitra Islandey miaraka amin'ny traikefa manokana, akaiky ary manokana izay fantatry ny marika EDITION. Ny vokatr'izany dia foibe an-tanàn-dehibe mavitrika sy be pitsiny miaraka amin'ny efitrano 253, filaharana trano fisotroana miavaka, trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana ary, amin'ny endrika EDITION marina, ny fampidirana karazana foto-kevitra ara-pahasalamana maoderina vaovao. Any amin'ny tanin'ny loharano mafana, rano mineraly ary fjord voajanahary, ity fanavaozana famoronana ity, traikefa ara-pihetseham-po lalina ary maha-azo itokiana an'i Ian Schrager, miaraka amin'ny fahaiza-manaon'ny Marriott International efa hatry ny ela sy ny fanatratrarana maneran-tany, dia miteraka tolotra miavaka izay mampitombo ny fitomboan'i Reykjavik. ho toy ny toeran'ny cosmopolitan iraisam-pirenena kilasy manerantany.
Toerana itadiavan'ny maro an'i Islandy, eo anelanelan'i Amerika Avaratra sy Eoropa Andrefana – nitombo ny làlan'ny sidina, sy ny tontolony hafa, izay misarika mpitsidika avy lavitra sy lavitra. Ny EDITION Reykjavik no marika tena lafo vidy voalohany niditra an-tsena izay manana fitaovana sy serivisy tsy misy hafa. Nipoitra voalohany teo amin'ny sarintany rehefa nahazo ny Tompondaka Erantany eran-tany tao Reykjavik i Bobby Fischer, lehiben'ny echec amerikana tamin'ny 1972, nilaza i Schrager, izay nanaraka ilay hetsika tamin'izany fotoana izany, fa talanjona tamin'ny hatsaran-tarehin'ny firenena tsy simba sy voajanahary. Eny tokoa, maroonina ao amin'ny Ranomasimbe Atlantika Avaratra, eo ambanin'ny Faribolan'ny Tendrontany Avaratra, i Islandy dia tena an-dalam-panamboarana, ny tontolony tsy mitsaha-mivoatra dia vokatry ny volkano mirohondrohona, ny loharano mafana miboiboika, ny geysers mipoitra ary ny takelaka tectonic. Izany rehetra izany dia niafara tamin'ny fifangaroan-javatra mahagaga sy mistika amin'ny saha lava maitso mavana voapetaka amin'ny lakan-drano, ny ranomandry miakatra sy ny tendrombohitra mikitoantoana notetehan'ny lohasaha lalina sy notapatapahan'ny renirano. Hoy i Schrager: “Any Islandy, dia mahita zavatra tsy ho hitanao any an-kafa ianao. “Mihoatra noho ny toerana hafa rehetra eto amin'izao tontolo izao, tena fahafahana hifandray amin'ny tany sy ny zavaboary izany ary faly izahay manitatra bebe kokoa ny marika EDITION amin'ny toerana tsy mampino misy hotely mampientam-po izay manome anao ny tena fahatsapana ny toerana.”
Tamin'ny fampiasana ny fikasihana Midas azy, i Ian Schrager dia namorona sy nanomana ary nanomana ny hotely mba hamoronana alchemy sy fahatsapana majika manokana ho an'ity hotely ity. Ny EDITION Reykjavik dia novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa mpanao maritrano eo an-toerana, T.ark sy studio any New York, Roman sy Williams miaraka amin'ny fitarihana ny ISC (Ian Schrager Company), maka an-kolaka ny fanahin'i Reykjavik ary misoroka ny clichés ary miorim-paka hatrany ny marika EDITION ny fahatsapana mahery vaika momba ny haingo sy ny fomba. Eo amin'ny toeran'ny seranana, manoloana ny tendrombohitra be voninahitra, ny hotely dia eo amin'ny toerana tsy misy kilema ao afovoan-tanàna: mifanakaiky amin'i Harpa, ilay efitrano fanaovana fampisehoana manan-tantara sy ivon'ny fihaonambe - izay ny fasadin'ny vera miloko maro loko dia noforonin'ilay mpanakanto Islandey sy Danoà malaza Olafur. Eliasson - ary minitra vitsy monja miala an'i Laugavegur, arabe fiantsenana lehibe ao afovoan-tanànan'i Reykjavik.
Avy any ivelany, ny The Reykjavik EDITION dia fanampim-panazavana amin'ity faritra afovoan-tanàna ity. Nodorana tamin'ny alalan'ny teknika japoney fahiny ny fasason'ny hazo shou sugi ban, ary ny rafitra vy miloko mainty dia miharihary amin'ny tontolon'ny lava be ao Islandy. Ny tsipika tsotra sy madio amin'ny tranobe mihitsy dia nasiana zoro mba hahazoana tsara indrindra ny fomba fijery sy ny toerana misy azy eo amoron'ny seranan-tsambo miaraka amin'ny lobby fidirana roa azo idirana na avy amin'ny plaza Harpa mpandeha an-tongotra, na ny Harbor. Ity farany - amin'ny fomba fijery lehibe amin'ny fahatongavana mitovitovy amin'ny The Times Square EDITION - dia manasongadina tafo, ny ilany ambany nohazavain'ny node LED fitaratra 12,210.
Tahaka ny amin'ny hotely EDITION rehetra, ny lobby dia toerana mavitrika sy ara-tsosialy izay mampiseho an-kolaka ny fahatsapana toerana sy fahatsapana ny fotoana. Eto, vato basalt - na vato volkanika - dia misongadina, miseho eo amin'ny gorodona, izay napetraka miaraka amin'ny lamina saro-takarina aingam-panahy avy amin'ny geometry islandey, ary birao fandraisana sary sokitra miavaka. Ao amin'ny ampahany afovoan'ny lobby, ny ekipan'ny ISC dia nanampy totem sculptural vato islandey mba hampifandanjana ireo fitaovana mafana toy ny hoditra lasely mihodinkodina manodidina ny tsanganana simenitra - sy ny gorodona hazo oaka fotsy, ny valindrihana ary ny slats, izay manelanelana ny lobby bar. Mifantoka amin'ny divay eran-tany amin'ny alalan'ny fifantenana vera sy cocktail mahazatra miaraka amin'ny fiodinana islandey ny sakafo lobby bar. Ny efitranon'ny lobby dia misy fatana fandoroana midadasika midadasika izay foiben'ny habaka, voahodidin'ny fipetrahana sy fanangonana fanaka vita amin'ny fomba manokana amin'ny vondron'olona mipetraka akaiky, toy ny seza fiantsonan'i Jean-Michel Frank amin'ny hety fotsy sy Pierre Jeanneret. -seza aingam-panahy amin'ny volory mainty. Toy ny mahazatra, misy fanamafisana mafy ny jiro mafana sy ankolaka, izay noheverina mba hamoronana hazavana malefaka sy hanazava ny fanaka raikitra toy ny bar sy ny birao fandraisana ary ny jiro vita amin'ny varahina fotsy Christian Liaigre mba hamoronana mitovy amin'ny firavaka. fametrahana boaty.
Tao anatin'ny fidirana amin'ny trano fandraisam-bahiny, ny ISC dia niara-niasa tamin'ny mpanao asa tanana teo an-toerana mba hamoronana sary sokitra totem amin'ny vatolampy basalta mitongilana avy any atsimon'i Islandy. Miakatra manakaiky ny efatra metatra ny haavony, ny aingam-panahin'ny sary sokitra dia hita ao amin'ny Cairns nentim-paharazana izay miasa ho marika manerana ny ambanivohitr'i Islandy. Ny jiron'ny jiro elektrika sy ny jiron'ny labozia ary voahodidin'ny dabilio basalt, ny totem dia voarakotra hoditr'ondry mainty mandrobona, daomasika mainty ary ondana landy, lasa toerana ivoriana hitazana sy ho hita eo afovoan'ny lobby. Eo akaikin'io, aingam-panahy avy amin'ny famirapiratan'ny aurora borealis (Javaratra Avaratra), ny ISC dia nanao sarintany ny Northern Lights ary namorona zavakanto nomerika mirefy telo dimensia sy atmosfera amin'ny onja dihy maitso sy volomparasy tsara tarehy. Eo amin'ny lobby no misy azy, manetsika fanehoan-kevitra sy fihetseham-po, mitovy amin'ny fahitana ny zava-boahary amin'ny lanitry ny alina any Islandy…saingy ao anatin'ny fampiononana, ny hafanana ary ny fifandraisana akaiky eo amin'ny lobby sy ny fatana. Antsoinay hoe Northern Lights izany raha ilaina.
Azo idirana avy eny amin'ny lobby, ny gorodona ihany koa dia fonenan'ny Tides, ilay trano fisakafoanana misy sonia misy efitra fisakafoana manokana, ary kafe misy entana vita amin'ny mofo vita an-trano, ary Tölt, trano fisotroana tena akaiky izay maka ny heviny avy amin'ny The London EDITION's Lobby Punch Room. Ny Tides, izay manana terrasse ivelany sy ny fidirana an-dranony manokana, dia tarihin'i Gunnar Karl Gíslason – chef ao ambadiky ny Dill, trano fisakafoanana New Nordic Michelin-kintana malaza any Reykjavik. Ny atitany manankarena sy saro-takarina dia noheverina tamim-pitandremana ho an'ny fifindrana tsy mitongilana amin'ny andro ka hatramin'ny alina, ahitana varavarankely avy amin'ny gorodona izay, mandritra ny andro, manome hazavana voajanahary eo amin'ny tsanganana simenitra misy sodina sy ny antsipirihan'ny hazo lavenona misy menaka toy ny takelaka valin-drihana mamirapiratra. , kojakoja isan-karazany, ary barazy miendrika hexagonal afovoany, izay mihantona lakandrano vita amin'ny alimo sy alabastera nataon'ilay mpanakanto frantsay malaza, Eric Schmitt. Amin'ny maraina, ny sakafo maraina dia fifangaroana vaovao sy mahasalama amin'ny ranom-boankazo madio, mofomamy, voankazo, voamadinika ary skyr (yaourt Islandy) ampian'ny sakafo à la carte misy sakafo mafana sy sandwich misokatra misokatra. Ho an'ny sakafo antoandro sy ny sakafo hariva, Gíslason dia manolotra sakafo Islandey maoderina, miaraka amin'ny soso-kevitra an-kolaka momba ny fomba fandrahoan-tsakafo nentim-paharazana, mifantoka amin'ny vokatra eo an-toerana amin'ny vanim-potoana sy ny kalitao avo indrindra amin'ny akora manerantany izay masaka indrindra amin'ny afo misokatra. Miaraka amin'ny lisitry ny divay midadasika maneran-tany, manantena sakafo toy ny salady mitsangana voapetaka miaraka amin'ny holatra oyster nendasina saosy soja efa antitra sy amandy natono, char Arctic manontolo feno voasarimakirana, dill sy tongolo gasy, cod Atlantika nendasina, ovy natono, anana mifangaro ary dibera ary ny sorony zanak'ondry nandrahoina sy nihena nendasina, nalona tongolo solila sy paoma, ary ho tsindrin-tsakafo, Tides karaoty mofomamy, buttermilk gilasy, karaoty sy ranomasina buckthorn jam, miaraka amin'ny menaka caraway natono. Misy ihany koa ny sakafo brunch amin'ny faran'ny herinandro ary telo alina isan-kerinandro, ny The Counter, izay mijery ny lakozia misokatra amin'ny teatra, dia hanolotra sakafo tsiro valo miaraka amin'ny divay ho an'ny olona 10. Mandritra izany fotoana izany, ireo izay mitady zavatra mahazatra kokoa dia afaka miditra ao amin'ny trano fisakafoanana sy kafe mba hisotro kafe sy fifantenana scone crowberry vao avy nendasina ho an'ny sandwich masira masira na mofo rye izay ahafahan'ny vahiny misakafo na esorina.
Eo amin'ny ilany mifanohitra amin'ny lobby, lavitra ny mason-tsivana, Tölt - nomena ny anaran'ny soavaly islandey fahadimy tsy manam-paharoa fantatra indrindra - dia trano fisotroana mahafinaritra, natao ho toerana masina miafina miaraka amin'ny zorony telo misy karipetra miloko miloko misy aingam-panahy. avy amin'ny géométrie islandey nentim-paharazana, rindrina ampongatapaka hazo, fanasam-boasary nodorana ary pony volom-bolo izay manodidina ny afo afovoany. Eo ivelan'ny alcoves, ny habaka dia voarakotra amin'ny valin-drihana vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo, ary ny gorodona, ny chandelier vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo, ary ny varavarankely amin'ny gorodona izay mamolavola ny fomba fijerin'i Harpa. Ao ambadiky ny bara maitso vita amin'ny marbra dia misy talantalana varahina efa antitra mihantona eo amin'ny valindrihana, izay mamorona hazavana mafana mba hankafizana sakafo cocktail aingam-panahy avy amin'ny kolontsaina islandey mampiasa fanahy islandey eo an-toerana.
Any amin'ny rihana faha-7 ao amin'ny hotely no misy ny The Roof ary manolotra tendrombohitra panoramic, Ranomasimbe Atlantika Avaratra ary fahitana tanàna tranainy. Ny habaka isan-karazany izay azo zaraina amin'ny varavarana fitaratra ho an'ny hetsika manokana dia mamela azy io ho toerana tsara indrindra hankafizana ny takariva fahavaratra mamirapiratra tsy manam-petra ary koa ny jiro avaratra mahagaga amin'ny volana mangatsiaka kokoa. Ny varavarana fitaratra gorodona mivoha eo amin'ny terrasse an-kalamanjana isan-taona, miparitaka miaraka amin'ny fipetrahana tsara sy lavaka afo lehibe, raha toa kosa ny atitany miloko mainty dia mamorona lafika malina izay tsy manalavitra ny fomba fijery. Eto, ny vibe mahazatra dia ampitomboina amin'ny sakafo kely misy sakafo mampionona toy ny mofo fisaka natono, sandwich voaendy ary salady vaovao. Avy amin'io toerana ambony io dia miharihary fa i Ian Schrager no nanamboatra ny hotely mifototra amin'ny fomba fijery avy amin'ilay trano.
Mivelatra eo ambonin'ny gorodona eo ambanin'ny tampon-trano, ny efitrano fandraisam-bahiny 253 ao amin'ny hotely sy ny suites dia novolavolaina ho toy ny fialan-tsasatra mafana, izay samy manana ny fandriany manatrika varavarankely mirefy rihana izay mamolavola fomba fijery samihafa momba ny manodidina. Ny sasany dia tonga feno miaraka amin'ny terrace ivelany, fa izy rehetra kosa dia fanehoana ny fomba fiasan'ny marika EDITION amin'ny haitraitra maoderina miaraka amin'ny tsirony an-toerana. Ny palette tsy misy pentina vita amin'ny hazo lavenona sy hazo oaka volondavenona mavo dia fototra mafana ho an'ny rindrina vita amin'ny simenitra, fanaka vita amin'ny trano italiana, sconce jiro varahina, karipetra volom-borona, ary asa tanana sy kojakoja avy amin'ny mpanao asa tanana eo an-toerana, toy ny fandriana miloko. atsipy avy amin'ny orinasa volon'ondry eo an-toerana, Ístex, seramika nataon'ny mpanakanto Guðbjörg Káradóttir, ary zavakanto an-efi-trano nataon'ny mpanakanto Islandey malaza Pall Stefansson sy Ragnar Axelsson mampiseho ny tontolon'ny islandey, afa-tsy amin'ny EDITION. Mandritra izany fotoana izany, ny efitra fandroana monochrome miaraka amin'ny taila vita amin'ny seramika fotsy vita amin'ny tanana vita any Italia, dia feno vaniny marbra fotsy, kojakoja mainty matte, ary fitaovana miaraka amin'ireo kojakoja Le Labo mahazatra amin'ny fofon'ny EDITION. Avy amin'ny zorony voalohany eo amin'ny rihana faha-6, ny Suite Penthouse iray misy efitra fatoriana - miaraka amin'ny terrace manokana misy azy manokana dia manana seranan-tsambo mahafinaritra, Harpa ary tendrombohitra izay ampian'ny ati-trano kanto mamirapiratra sy maivana amin'ny kojakoja mahazatra miloko marevaka amin'ny tonony oatmeal. Ny Suite Penthouse dia misy efitra fandroana lehibe miaraka amin'ny marbra fotsy italiana ary afo afovoany ihany koa.
Ny EDITION Reykjavik dia manolotra efitrano fivoriana sy hetsika maoderina, ao anatin'izany ny studio flexible, efitrano fandraisam-bahiny misy hazavana voajanahary, gorodona vita amin'ny hazo vita amin'ny oat, ary efitrano fandraisam-bahiny lehibe misy toerana mialoha ny asa. Azo zaraina ho efitra roa misaraka ny efitrano filaharana azo esorina miaraka amin'ny varavarankelin'ny vera mirefy hatramin'ny rihana, fa malalaka kosa ny varavarana fitaratra lehibe mba handraisana fiara. Ao anatin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia misy chandelier alabastera mihantona miaraka amin'ny fonon-tsela voajanahary voasarona manodidina ny efitrano filalaovana.
Ny gorodona ambany dia fonenan'ny Sunset, misokatra amin'ny faran'ity taona ity, toerana mangatsiatsiaka ambanin'ny tany miaraka amin'ny fanamafisam-peo manara-penitra sy jiro an-tsehatra izay manazava ny ati-trano vita amin'ny simenitra mainty maizina sy manjavozavo miaraka amin'ny bara vita amin'ny simenitra mainty. Ny filentehan'ny masoandro dia azo zaraina ho sehatra telo miaraka amin'ny fidirana amin'ny hotely sy ny kianja Harpa. Miaraka amin'ny sakafo cocktail mahafaty sy ny lisitry ny hetsika mitohy, ny klioba dia hampiantrano ny sasany amin'ireo DJ sy mpilalao malaza indrindra eran'izao tontolo izao, ary hanondro azy io ho toerana farany tsy azo tsinontsinoavina ao amin'ny tontolon'ny fiainana alina miroborobo ao Reykjavik. Misy ihany koa ny fidirana manokana ho an'ireo izay mila fahamalinana tanteraka. “Mety ho nofinofy ny nanokatra ny Studio 54 eto izay maharitra 6 volana ny haizina fa tsy ny adiny 8 toy ny any New York City. Mety ho toerana tonga lafatra ho azy io ”hoy i Schrager.
Ary koa, ao amin'ny gorodona ambany dia misy gym, izay voaravaka amin'ny fanazaran-tena mainty hoditra, lanja ary fitaovana cardio, na izany aza, ny foto-kevitra ara-tsosialy ao amin'ny Spa no iray amin'ireo tsy manam-paharoa indrindra. lafiny ao amin'ny hotely ary tena mampiavaka ny The Reykjavik EDITION. Miaraka amin'ny efitrano fitsaboana telo, hammam, efitrano fandroana, sauna ary dobo filomanosana izay manolotra hydrotherapy, dia misy ihany koa ny efitrano afovoany misy toeram-pisakafoanana, izay manolotra sakafo mahasalama vaovao aorian'ny fanazaran-tena Viking shakes, champagne ary, moss matsiro. fampidirana vodka miaraka amin'ny tsakitsaky toy ny mofo volkano misy sira lava mainty. Izany dia ankafizina indrindra ao amin'ny dobo fiparitahan'ny rano Geothermal miaraka amin'ny fitsaboana Sundown Spa mandritra ny 60 minitra, izay misy fanorana vatana mampatanjaka sy fanorana hodi-doha onyx mangatsiaka. Mifanandrify mivantana amin'ny Sunset, ny Spa no toerana tsara indrindra alohan'ny fety mba hanomanana anao amin'ny takariva mahafinaritra. “Zavatra tsy mbola hitantsika teo aloha ny toeram-pisakafoanana sy ara-pahasalamana misy bar”, hoy i Schrager. “Saingy ny fidinana any sy ny fiarahana sy ny fisotroana ary ny fidirana amin'ny rano mafana dia, indray, ny valin'ny hoe any Islandy. Ary ny fampifangaroana izany amin'ny fomba mahafinaritra sy kanto dia manamafy ny momba ny marika EDITION.